I-Apple Music sele inababhalisi abazizigidi ezili-30 | Ndisuka mac
Inkonzo yokusasaza umculo ka-Apple ihlala ingathinteleki, njengoko kunjalo nakwiSpotify, ngoku enabanikezeli abangaphezulu kwezigidi ezingama-60. Ngokwodliwanondlebe olunikezwe nguJimmy Lovine kupapasho lweBillboard, I-Apple Music ikhule kakhulu kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo kwaye ngoku unesiseko somsebenzisi sezigidi ezingama-30.
Kwinkomfa yokugqibela yabaphuhlisi, abafana baseCupertino baphinde baxhamla umsitho ukubhengeza ukuba ngalo mhla banabhalisi abazizigidi ezingama-27. Kwiinyanga ezintathu ezinesiqingatha kamva bagqithile kumqobo we-30, Ukuhlelwa nje kwesiqingatha sababhalisi abaninzi njengeSpotify, Inkosi yomculo engenakuphikiswa isasaza kwihlabathi liphela.
Akukho mntu uphikisayo ukuba uLovine ungumthandi womculo, eneneni wayengomnye wabaseki beBeats Music, kodwa uyavuma ukuba ukongeza ababhalisile abatsha, ukukhupha ii-albhamu ezizodwa kunye nokwaphula zonke iirekhodi kweli candelo, Akwanelanga ukugcina inkonzo yomculo ye-Apple kwintengiso:
Ndicinga ukuba sikwindawo elungileyo, sinabantu abachanekileyo kunye nesimo esifanelekileyo sokungahlali kwinto ekhoyo ngalo mzuzu. Kungenxa yokuba sifumana izigidi zababhalisi kwaye sandisa inani leekhathalogu ezikhoyo ayisiyonto ilungileyo. Ayizukubamba lonto.
Andicingi ukuba ukusasaza kwanele. Andivumi ukuba yonke into iza kuhamba kakuhle [nje] kuba iApple ingenile ngokungqamanisa kwaye amanani anyuka ngenxa yeso sizathu. Jonga ikhathalogu: ngumcimbi wexesha ngaphambi kokuba i-60's iye kwi-50 kunye ne-50 ukuya kwi-40. Abantu abaphula i-60's bazokufa- ndingomnye wabo. Ubomi buyaqhubeka. Ke kuya kufuneka uncede amagcisa enze izinto ezintsha angenakuze akwazi ukuzenzela zona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple Music sele inababhalisi abazizigidi ezili-30
I-Basketball yeNtloko ihlaziywa ngabadlali ababini abatsha kunye nolunye uphuculo